जनैपूर्णिमा पर्वमा सार्वजनिक विदा घोषणा गर्न तछाडमछाड, गण्डकी प्रदेशमा के हुन्छ ? | NepalDut
जनैपूर्णिमा पर्वमा सार्वजनिक विदा घोषणा गर्न तछाडमछाड, गण्डकी प्रदेशमा के हुन्छ ?
प्रदेश नम्बर २ सरकारका मुख्यमन्त्री र बहालबाला मन्त्रीबीच सार्वजनिक बिदाको बिज्ञप्ति जारी गर्न तछाडमछाड देखिएको छ । उनीहरुले रक्षा बन्धनको दिन बिहीबार सार्वजनिक विदाको घोषणा गर्न समेत यस्तै व्यवहार देखाए ।
रक्षा बन्धनका दिन दिइने सार्वजनिक विदाका लागि केही क्षणको अन्तरालमा उनीहरुले विज्ञप्ति जारी गरे ।
हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले मनाउने जनैपूर्णिमा एवम् रक्षाबन्धनको अवसरमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले यस विषयमा केही जानकारी दिएको छैन ।